မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ။(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ။(၁)
Posted by မိုးတိမ် on Oct 16, 2012 in Copy/Paste, Members | 14 comments
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် ——– Racially Offensive words : Deleted by Admin ———– မည် ။
သံကိုသစ်သားထဲရိုက်ထည့်ရင် ပျော့တယ်သစ်သားက နေရာဖယ်ပေးရတယ်တဲ့။
ရန်ကုန်၊ မန်းတလေး၊ တောင်ငူ၊ ပြည် စသည်ဖြင့်
ပြည်တွင်းက မြို့တွေမှာရှိတဲ့ ဗလီနဲ့၊ လူဦးရေ အချိုးအစား
ဆန့်ကျင်နေယုံနဲ့ ပီးဘူး၊ ဆန့်ကျင်တတ်ရမယ်။ ဘာတွေ လုပ်ပြီးပီလဲ… ကိုယ်ခံအား လုံနေပြီလား။ စာအုပ်ကိုင်ပြီး ဝါးလုံးခေါင်းထဲ လသာနေဆဲလား၊ ကိုယ်နဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ စိတ်မွေးနေအုံးမယ်ဆိုရင်၊ ပန်းခြင်းတူတာတောင် ငါ့ပန်းအလှဆုံး အမွေးဆုံး မာန်တက်နေမယ်ဆိုရင်၊ ပညာသိမသိ စာအသိနဲ့ ကမ္ဘာသိလုပ်နေမယ်ဆိုရင်၊ အမှားခြင်းအတူတူ ကိုယ့်အမှားနဲ့ သူ့အမှားကို နှိပ်ကွပ်နေမယ်ဆိုရင် မေ့….လိုက်….ပါ။
ဒေါင်း လို့မရဘူး ဖတ်ဖူးတာကြာပြီ ဒေါင်းပြီးတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားဈေးတန်းမှာရောင်းချင်ထှာ
အူးကြောင်ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြောချင်တာကလေ ဖေ့ဘွတ်မှာရောတခြားစာမျက်နှာတွေမှာ
တွေ့နေရတာက ဆဲကြတယ် တော်တော်လေးရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲကြတယ် သူများရိုင်းတိုင်းလိုက်ရိုင်းစရာမလိုပါဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးရိုင်းစိုင်းနေကြတယ်။
သူများကို အတင်းဝိုင်းပြီးပိုးစိုးပက်စက်ပြောနေရုံနဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။
ကျနော့အတွက်တော့ အစ္စလာမ် ဘာသာဟာ အစွန်းရောက်လွန်းတဲ့ အတွက် မကြိုက်ရတာပါ၊ တစ်နေ့ကပဲ အာဖဂန် မှာ မိန်းကလေးတွေ ကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့ လှုပ်ရှားတဲ့ ၁၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ကို တာလီဘန် တစ်ယောက် က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်လုပ်ကြံတာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ တော်တော်စိတ်ပျက်မိတယ်။ ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးကို ဘယ် ဘာသာ ပဲ လုပ်လုပ် လုပ်တဲ့ ဘာသာ ကို ကန့်ကွက်ရမှာပဲ။ ဒါမျိုးကို ရှေးအရင် က ခရစ်ယာန်တွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ရှေးကထက် ပိုပြီး အသိဉာဏ်ရှိ၊ ပိုပြီး ယဉ်ကျေးလာတဲ့ အခုခေတ်မှာ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။
မိုးတိမ်ရဲ့ ကြိုးစားထားမှု့ကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အကြံပေးလိုတာက သူတို့ ရေးသလိုမျိုး သမိုင်းယောင်ယောင်၊ ရာဇဝင်ယောင်ယောင် တွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်စေချင်တယ်။ သူတို့ရေးတဲ့ လံကြုတ်ဇတ်လမ်းတွေ ကြောင့် သူတို့ကို ပိုအထင်သေးလာကြတယ်။ မွတ်စလင်တွေဘက် ကလည်း လွဲနေတဲ့ အချက်တွေ့ရင် ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။
brainwash လုပ်ခံထားရတဲ့ သူတွေကို တတ်နိုင်သမျှ မျက်စိဖွင့်ပေးတာလည်း ဂဇက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ် ဘာသာ အပေါ် သူကြီးက မွတ်စလင်တွေထက် ပိုပြီး sensitive ဖြစ်နေတယ် လို့ထင်ရတယ်။ ရွာကို တိုက်ခိုက် မှာ စိုးရိမ်တယ်ဆိုပေမယ့် သူကြီး နည်းလမ်းက လွဲနေပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိနိုင် တယ်လို့ထင်ရတဲ့ ပို့စ်ကို user level နဲ့ access လုပ်ခွင့် ကန့်သတ်လိုက်တာထက် သူကြီး မကြိုက်ရင် လုံးဝဖျက်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ user level တွေခွဲတာ ရွာရဲ့ စည်းလုံးရေးကိုထိခိုက် နိုင်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ မည်သည့် ပို့စ်မဆို ရွာသူားအားလုံး ဖတ်ခွင့်ရှိစေချင်တယ်။ နို့မဟုတ်ရင် member လုပ်တာ အဓိပ္ပါယ်မရှိသလိုဖြစ်နေတယ်။
ရွာလုံခြုံရေးကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အတွက် သီးသန့် issue အဖြစ်ဆွေးနွေး သင့်တယ်။ ပညာရှင်တွေ ကူညီကြပါ။
ဒီတချက်တော့ သိပ်ဟုတ်တယ်။ user level နဲ့ access လုပ်ခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တော့ ကျုပ်မှာ ကျုပ်ရေးထားတဲ့ ကွန့်မန့်တောင် ကျုပ်ပြန်ကြည့်လို့ မရတော့ဘူး။ ဖတ်ဆိုလဲ အားလုံး ဖတ်ရမှာပေါ့။ ဘာလဲ ရွာသားကြီးတို့ ရွာသူကြီးတို့ အဆင့်သတ်မှတ်တာက အားလုံး ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေတာပဲ။ တခြားဆိုဒ်ဆို ကျုပ်က ဘက်လိုက်တယ်လို့ ထင်မှာပဲဗျ။
ဒါပေမယ့် သူကြီးရဲ့ သမာသမတ်ကျပုံက ဈေးထဲက သမာဓိချိန်ခွင်ကြီးလိုပဲ ဆိုတော့ စွပ်စွဲရခက်နေတာပေါ့။ ကျုပ်ပြောတာကို ဘုရားစူး မိုးကြိုးပွတ် ယုံကြပါ။ သမာသမတ် ကျလွန်းတဲ့ သူကြီးဟာ သမာဓိတရားရှင်ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ကိုရထားတာပါ။ နဖူးမှာလည်း လခြမ်းတံဆိပ်ကြီးနဲ့လေ။
အဲဒီ သမာဓိချိန်ခွင်ကြီးက သံဂျေးတက်နေတယ်ခင်ဗျ။အခုတောင်ကျုပ်ကို မကြိုက်တဲ့အသံတွေထွက်နေ
ပြီခင်ဗျ။ချွန်တွန်းတွေ ဘာတွေဖြစ်နေပြီဗျ၊ ဒင်းတို့ဘက်ကစတာတွေကျတော့ တစ်ခွန်းမှဝင်မပြောတာ
နဖူးက လခြမ်း ကို တရုတ်ကားထဲက ပေါင်ချိန်နဲ့ မှားပြီး ကျေနပ်နေအုန်းမယ်။
အခုလည်း စိးပွားရေးဖက်က လှည့်ပြိးနယ်ချဲ့ နေပြိ
အားမပေးပါနဲ့ စိးပွားရေးပိတ်ဆို့ကြပါ သူတို့လက်ထဲ
ရောက်သွားတဲ့ ဓနအင်အားဟာ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်မဲ့
လက်နက်ပါပဲ၊ မြန်မာအမျိုးသမိးတွေ စောင့်ထိမ်းပါ၊
ခေါင်းမိးမခြုံချင်ပါနဲ၊ဌာနဆိုင်ရာက လာဘ်စားတဲ့ လူကြိးတွေ
ကုလားဟာတော့ မစားကြပါနဲ့၊မှတ်ပုံတင် အရာရှိတွေ
ကုလားကိုတော့ အမျိုးသားဖြစ်အောင် မလုပ်ပေးကြပါနဲ့ ။
တောင်းဆိုပါတယ် အမျိုးသားရေးတာဝန်မို့ ပါ။ရှက်ကြပါ။
ပိုစ်တင်တဲ့ ကိုမိုးတိမ် ကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ ပိုစ်နာမည်တွေ့ပေမဲ့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုဖတ်တာကတော့ တခြား နေရာတွေမှာ ဖတ်ပြီးသား မှတ်ပြီးသား ဆိုပေမဲ့ စေတနာကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။
ကိုယ့်တာ ကိုယ်လုံ ဖို့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ သိအောင်တော့ ပြောပြသင့်တယ်။
မသိတာတွေ များနေလို့ ဆုံးမ သွန်သင်မှုအားနည်းလို့ ဆင်းရဲမှုက လွတ်မြောက်ချင်လို့ စသဖြင့် ဘာသာပြောင်းခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ဒုနဲ့ဒေး ဖြစ်နေတာမို့.. နယ်မြို့ ဂျောင်ကျတဲ့ ရွာတွေမှာ နေတဲ့ လူတွေ သိစေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်တွေသာ ဘာသာပြန့်ပွားရေး အဓွန့်ရှည်ရေး အတွက် နားလည်အောင် သွန်သင်မှု မလုပ်တာ.. ဘယ်လောက် ခေါင်ခေါင် တခြားသော ဘာသာတွေက သူတို့ ပြန့်ပွားရေး အတွက် အားထုတ်မှုက ပိုတယ်။
ကျုပ်တို့တွေကလဲ လူထဲက လူပဲမို့ လူ့လောက ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေထားကို
သိသင့်သလောက်တော့ သိပါတယ် ….
မပြောသင့် မပြောချင်လို့ နေခဲ့ရပေမဲ့ … ပြောသင့်တဲ့အချိန်အခါရောက်လာပြီဆိုရင်
ပြောသင့်ပြောထိုက်တာကိုပြောကြရမှာပါ….( အမ်.. ရှုပ်ကုန်ပြီ )
အားလုံးမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိနေသလို တာဝန်ကိုယ်စီ ထမ်းရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် …။
ကျုပ်လဲ ဒါလောက်ပဲ ပြောပါရစေ … သူရဲကောင်းကြီး ကိုမိုးတိမ် …